प्रायः सोधिने प्रश्न - लाइट अन
Home > हाम्रोबारे>FAQ
तपाईको कम्पनी कुन वर्षमा स्थापित भयो? त्यहाँ कति जना कामदार छन् र कति कवचहरूले यो कभर गर्छन्?
शेन्ज़ेन लाइट अन टेक्नोलोजी कम्पनी २०१ 2019 मा स्थापित भएको हो। यो एक उच्च-टेक उद्यम हो जुन R&D, उत्पादन र बिक्री एकीकृत गर्दै छ। यो एलईडी प्याकेजि and र प्रकाश डिजाइनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कम्पनीको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, १० बर्ष भन्दा बढी उद्योगको अनुभवको साथ। वर्तमान कार्यशाला क्षेत्र २००० वर्ग मिटर छ।
लाइट अन टेक्नोलोजीले मुख्यतया एलईडी ग्रोथ लाइट र एलईडी सीओबी स्ट्रिप प्रकाश आपूर्ति गर्दछ। हाम्रो सबै उत्पादनहरू निजी मोल्डिंगको साथ डिजाइन गरिएको छ जुन उच्च recongnized र बजारमा उच्च गुणवत्ताको छ। यसले तपाईको आफ्नै ब्रान्ड निर्माण गर्न ठूलो सहयोग गर्दछ। प्रतिस्पर्धी मूल्यको साथ उत्पादनहरू पनि उपलब्ध छन्।
१) संस्थापकहरूले यसभन्दा पहिले खोज र विकासका निर्देशकको रूपमा काम गरेका छन्, १० बर्ष भन्दा बढीको लागि एक प्रसिद्ध सार्वजनिक सूची कम्पनीहरूमा मार्केटिंग। तिनीहरूले कठोर परिश्रम र कडा गुणस्तर आवश्यकताको भावना खेती गरेका छन्। लाइट अन टेक्नोलोजीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आईएसओ मानक पूरा गर्दछ र विश्वास गर्दछ कि गुणस्तर पहिलो â हुन्छ
)) हामी उत्पादन नवाचारमा धेरै ध्यान दिन्छौं र बजारको विकाससँग तालमेल राख्छौं।
)) उच्च गुणवत्ता र ध्वनि आपूर्ति श्रृंखला उत्कृष्ट उत्पादन नियन्त्रणको साथ
२०२० मा टर्नओभर कति हो, र २०२१ मा अनुमान गरिएको यो के हो?
हाम्रो उत्पादन मापन विस्तार गर्न, हामी यहाँ सरेका छौं र हाम्रो कारखाना गत वर्ष पुनः सजावट गरिएको थियो। त्यसोभए यो नयाँ देखिन्छ। हामी हाम्रो ग्राहकहरुलाई राम्रो अनुभवको अनुभव गराउने आशा गर्दछौं, र हामी आफ्ना स्टाफलाई आरामदायी कार्य वातावरण प्रदान गर्न चाहन्छौं। एलईडी उद्योग एक उदीयमान र अपेक्षाकृत युवा उद्योग हो, जस्तो हाम्रो स्टाफहरू। तिनीहरू ऊर्जावान, जोशिलो, स्मार्ट, शिक्षित र नयाँ चीजहरू सिक्न इच्छुक छन्।
सामान्यतया १० सेल्सम्यान। तिनीहरूलाई भौगोलिक बजार द्वारा दुई टोलीमा तोकिएको छ। अमेरिकाको लागि टीम र युरोपको लागि टीम। हामी हाम्रो ग्राहकहरु संग नवीनतम समाचार साझा र मार्केट मा मजबूत बढ्न खुशी छौं।
यस बर्ष हामी अमेरिकाको बजारमा बढी लगानी बढाउनेछौं, जस्तै: लामा र शायद शिकागो र फ्लोरिडामा गोदाम स्थापना गर्न छिटो डेलिभरी र उत्तम सेवाको लागि। हामी के चाहन्छौं प्रत्येक राज्यमा एक ठूलो कम्पनी पत्ता लगाउनको लागि गहिरो विन-विन सहयोग हो। हामी उपभोक्तालाई यी कम्पनीहरूमार्फत सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं र उनीहरूले हाम्रो आपूर्तिबाट आविष्कार र रचनात्मक उत्पादनहरूको सहयोग प्राप्त गर्नेछन तिनीहरूको आपूर्ति बढाउनको लागि। चेन क्षमता.हैं हामी OEM र ODM स्वागत छ।
हो हामी केहि क्षेत्रहरुमा हाम्रा ग्राहकहरुलाई एक्सक्लूसिभ दिन चाहन्छौं। यदि कारण, त्यहाँ प्रत्येक महिना वा बर्षको एक मात्राको आवश्यकता हुन्छ। के मलाई थाहा छ कि तपाइँले प्रत्येक महिना माग्नु भएको मात्रा थाहा छ? तपाईंको मार्केटिंग च्यानल कहाँ छ? वा के तपाईंसँग पहिले एलएलडी प्यानल प्रकाश वा केही कारखानाहरूबाट अन्य उत्पादनहरूमा अन्य अपवादहरू छन्?
के तपाई अमेरिकामा कार्यक्रममा भाग लिनुहुन्छ? अनि ती के हुन्?
एलईडी बढेको प्रकाश र क्यानाबिस सम्बन्धित उत्पादनहरूका लागि हामी प्रायः संयुक्त राज्यमा CWCB एक्सपोमा भाग लिन्छौं। एलईडी पट्टी प्रकाश को लागी, गुआंगज़ौ अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाश प्रदर्शनी र ह Hongकong लाईटिंग मेला हाम्रो पहिलो छनोट हो।
उल मल्टिलिस्टिंग: १-२ हप्ता
१) ML अनुरोध फारम भर्नुहोस्
DLC मल्टिस्टि .्ग: weeks हप्ता वा यति
१) ग्राहकहरूलाई ट्रेडमार्क प्राधिकरण पत्र भर्न र विनिर्देशहरू प्रदान गर्न भन्नुहोस् (डाटामा ध्यान दिनुहोस्, यसमा कुनै DLC देखाइएको छैन)
२) ग्राहकहरू खाता दर्ता गर्न आवश्यक छ यदि उनीहरूसँग कुनै DLC खाता छैन भने।
)) इनभ्वाइस DLC बाट जारी गरिनेछ, ग्राहकहरूले यसको लागि भुक्तान गर्नुहोस्।
)) DLC ले weeks हप्ता लिन सक्नेछ।
हामी सँधै एलईडी बढ्दो बत्तीहरू राम्रो र परिष्कृत गर्दछौं। हामी उत्पादनको विकासमा अग्रणी साथी बन्न प्रयास गर्दैछौं, हामी पीपीएफको प्रभावकारिता बढाउनेछौं, पीपीएफडीको एकरूपता सुधार गर्नेछौं, साथै उत्पादको उच्च लागतको प्रदर्शन पनि गर्नेछौं।
ग्राहकको आवश्यकता अनुसार, र उत्पादको गुणवत्ता र जीवन अवधि सुनिश्चित गर्न, हामी मिनेवेल, ईन्भेन्ट्रोनिक्स, र सोसेन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती पावर आपूर्तिका छनौट गर्दछौं।
तपाईं कुन एलईडी प्रकाश स्रोत अपनाउनुहुन्छ?
तपाईंको कम्पनीसँग कति QA हरू छन्, र के तैयार उत्पादनहरू पूर्ण निरीक्षण गरिन्छ वा अनियमित रूपमा निरीक्षण गरिन्छ?
वर्तमानमा कम्पनीमा १० गुणस्तरीय नियन्त्रण कर्मीहरू छन्, जो आगमन सामग्री निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, प्याकेजि before अघि तयार उत्पादहरूको पूर्ण निरीक्षण, र प्याकेजिंग पछि उत्पादहरूको अनियमित निरीक्षणको लागि जिम्मेवार छन्।
तपाईको कारखानाको FTT के हो?
हो, हामी कडाईका साथ हाम्रो LED रोशनी उत्पादन SOP अनुसार
तपाईंको ग्यारेन्टी कति लामो छ? यदि त्यहाँ एक दोषपूर्ण उत्पाद छ भने मैले के गर्नुपर्छ?
हो, हाम्रो LED बढ्ने बत्तीहरू ETL, CETL, CE, ROHS सूचीबद्ध छन्।
के तपाईंको कम्पनीले OA भुक्तानी स्वीकार गर्दछ? उदाहरण को लागी, days० दिन, days ० दिन, १२० दिन
H०HQ कन्टेनरमा कति W००W एलईडी बढ्ने बत्तीहरू हुन्छन्? के तपाईको प्याकेजि्ग शिपिंग नोक्सानीको मामलामा पर्याप्त बलियो छ?
कस्टम प्याकेजि forको लागि न्यूनतम अर्डर मात्रा आवश्यकता के हो?
हामीलाई अनुकूलन प्याकेजि forको लागि २०० पीसी चाहिन्छ।
हामीसँग हाल R अनुसंधान तथा विकास कर्मीहरू छन्, तिनीहरू सबैको एलईडी सम्बन्धित उद्योगहरूमा १० बर्ष भन्दा बढी कार्य अनुभव छ।
तपाईको कम्पनीले कहिलेसम्म नयाँ उत्पादनको विकास गर्छ?
उत्पादनको कठिनाईका अनुसार, सामान्यतया LED प्लान्ट लाइटहरूको लागि, हाम्रो विकास चक्र लगभग २ महिना हो।
हाम्रो दीर्घकालीन सहयोग ग्राहकहरूको लागि, हामी सहयोग गर्न इच्छुक छौं। यद्यपि चीनको वित्तीय नीतिलाई ध्यानमा राख्दै हामी त्यसो गर्न ठूलो रकम स्वीकार गर्न सक्दैनौं।
हो हामी सक्छौ।
के म तपाई बाट केवल केहि स्पेयर पार्ट्स किन्न सक्छु?
हो, हाम्रो सहयोग ग्राहकहरु लाई।
के तपाईको उत्पादनहरु गुवाzhou्जुमा मेरो गोदाममा पठाउन सक्नुहुन्छ?
तपाइँ कसरी उत्पादनहरू प्याक गर्नुहुन्छ?
हामी स्पन्ज, भित्री बक्स र बाहिरी बक्स र कुना को संरक्षक को उपयोग गरेर नेतृत्व बढेको प्रकाश लाई बचाउन प्रयोग गर्दछौं।
हैन हामी पनि यस क्षेत्रमा तपाईको जस्तो एजेन्ट बन्नको लागि एक मजबूत पार्टनर खोजिरहेका छौं।
सम्भावित ग्राहकहरूका लागि हामी केही प्रोजेक्ट तस्वीरहरू प्रदान गर्न सक्दछौं।
यो केवल १०-मिनेटको ड्राईभ हो हाम्रो कम्पनीबाट तारा श्रेणीकृत होटलहरूको लागि।
यो हाम्रो कम्पनी बाट बाओन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट को बारे मा .० मिनेट ड्राइव छ।
के तपाईंसँग विस्तृत र व्यावसायिक स्थापना म्यानुअल छ?
बिभिन्न उत्पादनहरु का फरक MOQ हुन्छ। नेतृत्व बढेको प्रकाशको लागि, MOQ मात्र २ पीसी हो।
हामी एक गम्भीर निर्माता हो।
सामान्यतया एलईडी बढेको प्रकाशको लागि, वितरण समय नमूना अर्डरहरूको लागि orders- days दिनहरू हुन्छ; भारी आदेशहरूको लागि, यसले २० दिन बढी वा कम लिन्छ।